Home Wararka Mareykanka oo soo afjaray qorshaha kala bixitaanka ciidankeeda dalka Soomaaliya
Iyada oo la meelmarinayo go’aankii MW Trump ee ahaan in gabi ahaan ciidamada Mareykanka laga saaro dalka Soomaaliyaa ayaa waxa la soo afjaray qorshah ciidanka looga saarayo dalka Soomaaliya.
Waxa jira warar aan la xaqiijin oo sheeya in laga yaabo in aan laga wada saari cidanka dalka Soomaaliya. Sarkaal diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa u sheegay jariidada Foriyan Policy in kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee Somalia uusii socon doono hadii ay dhameystirmaan xitaa waxa uu maamulka qorshihiisu yahay in si deg deg ciidamada loogu celiyo saldhigyadooda si looga fogaado ayuu yiri in Somalia markalae gacanta ugasho al shabab kaliya aan khatar ku ahayn Soomaalida balse handadi doonto ajaanibta gobolka kusugan.
Dhanka kale Sarkaal ka tirsan ciidanka Danab oo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in Somalia xiligaan aysan jirin wx ay kaga baahi badantahay in Ciidamada Mareykanka kusugnaadan Somalia hadii ay kabaxaana ay dhulal horey looga qabsaday Al shabab ay kusoo rogaal celin doonaan. Sarkaalkaan ayaa xusay in Ciidamadaan oo lageeyo wadamada dariska sida Jabuti iyo Kenya aysan noqon doonin mid ku filan ka hortaga hanjabadaaha ka imaanaya Al shabab.